မိခင်ပါတီသို့ပြန်လာရန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏သဘောထားကြေညာချက် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
Battle News တိုက်ပွဲသတင်းအထူးစာမျက်နှာ
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မိခင်ပါတီသို့ပြန်လာရန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏သဘောထားကြေညာချက်	January 7, 2010
မိခင်ပါတီသို့ပြန်လာရန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏သဘောထားကြေညာချက် Kaowao ဇန်နဝါရီ ၆၊၂၀၁၀။
ကောင်းဝါ(ဇန်နဝါရီ- ၆)။ ။ မွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ သစ်တစ်ဖွဲ့ ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့သူတို့အပေါ်သဘောထား ချက်ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ လွန်ခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့စွဲဖြင့် မွန်ဘာသာကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ကောင်းဝါသတင်းဌာနမှ ယနေ့တွင် လက်ခံရရှိသည်။(ကောင်းဝါ၏မွန်ဘာသာကဏ္ဍတွင် ဖတ်ရှု့နိုင်သည်- အယ်ဒီ တာ)
အဆိုပါကြေညာချက်တွင် နိုင်ဂျလွန်းထော၊ နိုင်ထူး တို့အား (၄၅)ရက်အတွင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ/ မွန် အမျိုးသားတပ်မတော်သို့ပြန်လာရန်ထပ်မံဘိတ်ခေါ် သည်ဟု အတိအလင်းဖေါ်ပြပါရှိသည်။
၄င်းတို့နှစ်ဦးသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဗိုလ်မှူးနှင့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိကြသူများဖြစ်ကြပြီး စစ်အစိုးရနှင့်မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၏ ဆက်ဆံရေးအနေအထားကို လက်မခံလိုကြသူများဟု သိရသည်။ အထူးသဖြင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ကိစ္စ ဟုသိရသည်။
၄င်းတို့သည် နယ်စပ်တစ်နေရာကိုအခြေခံပြီး မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းအချို့ကို ပြန်လည်စုစည်းကာ မွန်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ဝက်ခန့်က ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် သဘောတူညီမှုရယူခဲ့တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲယုံမျှသာ ပြောဆိုကတိပြုခဲ့ကြပြီး ဆက်လက်၍ စစ်အစိုးရမှနိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးရေးများမပြုလုပ်ဘဲ နောက်ပိုင်းတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ပြောင်း လဲရန် တဖက်သပ်ဖိအားပေးလာသည်ကို တွေ့ရှိလာရသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် မွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MNDA သည် စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ကိုဆက်လက်တိုက် ခိုက်သွားရန်နှင့် မွန်လူထုအားကာကွယ်ရန်ဟု အောက်တိုဘာလက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၄င်းတို့၏ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါမွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ မွန်အမျိုးသားတပ်မတော်တို့နှင့် လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ကောင်းဝါမှဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းချက်အရ MNDA တပ်ဖွဲ့တွင် လူ၊ လက်နက်အင်အား တပ်ခွဲတစ်ခွဲခန့်ရှိပြီး မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးတောင်ပိုင်းဒေသနှင့် ရေဖြူမြို့နယ်ဒေသ တဝိုက်တွင် လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
၄င်းတို့လှုပ်ရှားရာ အချို့ဒေသသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအုပ်ချုပ်လျှက်ရှိသော ဒေသများလည်းဝင်ရောက်လာနေကို သိရှိရသဖြင့် MNDA တပ်ဖွဲ့များ မွန်ပြည်သစ်ဒေသအတွင်း ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီထုတ်ပြန်ချက် နောက်ဆုံးအပိုဒ်တွင် သတိပေးဖေါ်ပြထားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဒေသတွင်း လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့သော် အမြင်နှင့် ပဋိပက္ခများသာ ပိုမို ရှုပ်ထွေးစေသဖြင့် မွန်တိုင်းရင်းသားများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိ၊ ပြန့်ကြဲနေသော အင်အားစုများကို သဘော ထားကြီးစွာဖြင့် ပြန်လည်စုစည်းသွားမည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဖေါ်ပြရေးသားထားသည်။
လက်ရှိစစ်အစိုးရကို တိုက်ခိုက်နေသော အဖွဲ့များမှာ နိုင်ပန်းညွန့် ဦးစီးသည့် ဟံသာဝတီပြန်လည်တည်ထောင်ရေး ပါတီ၊ နိုင်ချန်းတိန်းအုပ်စု၊ နိုင်ဗင်းအုပ်စု၊ မွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MNDA တို့ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် လက်နက်ချ၊ ပူးပေါင်းလျှက်ရှိသည့် မွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ တနင်္သာရီတိုင်းတွင် နိုင်ချမ်း တိမ်း ဦးစီးသော မြိုတ်ခရိုင် ချောင်ချိဒေသအဖွဲ့၊ နိုင်စိုက်ချမ်း (ခေါ်) နိုင်ဇံအဖွဲ့၊ နိုင်အောင်နိုင် ဦးစီးသော MNPCP တို့ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါတပ်ဖွဲ့အားလုံးမှာ စစ်အစိုးရနှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး နောက်ပိုင်း အခြေအနေအရပ်ကြောင့် မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ထပ်မံပဲ့ထွက်လာသော အဖွဲ့ငယ်များဖြစ်သည်။
Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:Like Loading...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှု မွန်ပြည်နယ်တွင် ပြုလုပ်
Facebook မှာတိုင်းရင်းသားအသံ	Tineyintharvoice EthnicnationalitiesvoiceCreate Your Badge
Recent Posts	>KIA Sniper Team Killed three Burmese soldiers. ဗမာစစ်သားသုံးယောက်ကိုကချင်းလက်ဖြောင့်စနိုက်ပါးတပ်ဖွဲ.ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့
>Kachinn Refugees fled from recent fight of KIA and Burman troop List. ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စာရင်း
>Kacin Women in remote villages being Helpless, Tortured and Raped. ရွာတွင်ရှိကချင်အမျိုးသမီးများအကူအညီမဲ့ဗမာစစ်တပ်၏၊နှိပ်စက်မုဒိန်းကျင့်ခံနေရ
>Kachin War’s Photo documents. ကချင်နဲ.ဗမာစစ်ပွဲဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
Bush Imposes new sanctions on Myanmar
President and Mrs. Bush Meet with Dissidents
Flight from JuntaFleeing from fighting